Foton Motor Boka - Foton Motor Boka Co, Ltd.
Foton mota Boka
Kupa zvigadzirwa zvakakosheswa-zvakawedzerwa uye masevhisi kune vashandisi vemuno, uye kuita pasirese kutungamira kwekugadzira mota uye maitiro ekushanda kune mamwe matunhu nebhizinesi rayo.
Kugadzira kukurumidza kusimudzira mune yekutengesa mota bhizinesi.
KUTUNGAMIRIRA CHINA KWEZVINHU ZVOKUDZIDZA
Foton Motor Group yakavambwa muna Nyamavhuvhu 28, 1996 uye inotungamirwa muBeijing, China. Iine bhizinesi chiyero ichifukidza yakazara nhevedzano yemotokari dzekutengesa dzinosanganisira epakati uye anorema-marori marori, marori-anoshanda-marori, maveni, anotora mabhazi, uye yekuvaka michina mota uye yekuunganidza yekugadzira uye yekutengesa vhoriyamu ingangoita 9,000,000 mota. Foton mota Brand kukosha kwave kuongororwa senge US $ 16.6 bhiriyoni, ichitarisa NO. 1 ye13 anoteedzana makore muChina yekutengesa mota munda.
Kuve wepasi rose anotungamira wekutengesa mota mugadziri nevepasi rose.
KUFUNGWA & KUONESWA
Kubva payakavambwa, Foton Motor yanga ichitarisa pakuvaka ramangwana rakazara nekudyidzana kwevanhu, mota uye zvisikwa.
mufananidzo wedhaimani wakadomwa semucherechedzo we logo yeMoto Motor, inomirira tekinoroji, mhando, kukosha kwakanyanya uye kusingaperi. Foton "Brilliant Diamond" inofananidzwa nedhaimani rinopenya, izvo zvinoreva kuzvipira kwaFoton kuhunyanzvi hwekugadzira zvinhu, kuchengetedza kwevanhu uye runako rwekuwirirana.
Foton mota inotungamira nzira kune ramangwana rekufamba, inogadzira zvakakwana uye zvakasarudzika tsika dzisingaperi dzekugara kwevatengi, nzanga uye vanhu.
Isu FOTONER tiri kugara takanangana nekupokana zvinangwa zvepamusoro, kutora mikana inovandudzika yekusimudzira, kusimudzira mwero wedu wekuvimbika, kuvimbika uye kugutsikana kwevatengi, kutyaira hupenyu hwazvino kuburikidza nekuzvipira kuhunyanzvi hwakabatana
TECHNOLOGY INOTUNGAMIRIRA MUNGUVA YENGUVA
Inotungamira iyo nzira kune yepasirese yekutengesa mota inogadzira.
MunaAugust, 1996, Foton Motor yakavambwa muBeijing China.
Yekutanga FOTON AUMAN rori yakazvarwa.
MunaAugust, 2002, FOTON AUMAN yakabudirira kubviswa pamutsetse wegungano muChina.
AUV BHASI, YAKADZIDZWA PAMUSORO PAMUSANGANO.
MunaNovember 2004, mota ye1,000,000th, FOTON AUV bhazi, yakaburuka pamutsetse wegungano.
MUMWE ETX YOKUYEDZA RATIDZA.
MunaGunyana 2006, iyo German Speyer tekinoroji museum inounganidza Auman ETX. Zuva rinotevera, Auman ETX anotora chikamu mumutambo wekuratidzira nemarori eMercedes-Benz mupasi rinozivikanwa reFormula One F1 kuHockenheim.
FOTON CUMMINS JOINT VENTURE Yakagadzwa.
Muna Kurume, 2008, mubatanidzwa weFotos neCummins, Beijing Foton Cummins Injini Co, Ltd., yakasimbiswa zviri pamutemo.
FOTON NEW LOGO MUFANANIDZO YATANGA.
MunaAugust, 2010, FOTON yakatanga iyo nyowani brand logo "Brilliant Diamond", zvinoreva kuzvipira kwaFoton mukugadzirwa kwehunyanzvi, kuchengetwa kwevanhu uye runako rwekuwirirana.
MOTI zviuru zvishanu MOTOTI MOTORI YAKADZOREDZWA PAMUSORO WEMUSANGANO.
MunaGunyana, 2011, mota yeFOTON's zviuru zvishanu zvemazana yakabviswa pamutsetse wegungano muChina.
FOTON DAIMLER AUTOMOTIVE JOINT VENTURE YAKASIMBISWA.
Muna Kukadzi, 2012, mubatanidzwa weFoton Daimler Automotive Co, Ltd. yakavambwa muBeijing China.
FOTON VANS YAKATEDZWA
MunaEpril, 2013, yekutanga bhizinesi-kirasi van - FOTON VIEW CS2 yakatangwa muChina.
MunaNdira, 2014, FOTON yakatumira TUNLAND kunokwikwidza kuDakar 2014 kekutanga.
MunaNdira, 2016, FOTON TUNLAND neSAUVANA vakaita muDAKAR 2016 rally.
MunaGunyana, 2016, FOTON yose-nyowani yepakati uye inorema basa rori - AUMAN EST, yakaratidza kuIAA kuGerman.
FOTON DZEMAHARA DZINOTUNGAMIRA PFUNGWA YEMAHARA
MunaNovember, 2016, FOTON yekutanga akangwara kutyaira rori yakatangwa muShanghai China.
FOTON ZF JOINT VENTURE YAKASIMBISWA
MunaGunyana, 2017, Foton ZF yekudyidzana mubatanidzwa yakavambwa. Mhemberero inokatyamadza yeFotos & ZF yepamusoro-yekupedzisira otomatiki hutachiona chirongwa chakatangwa.
Inotungamira bhizimusi reChina rekutengesa mota
Kusvetukira Mberi seGlobal Corporation